मिर्जापुर’मा नै श्वेताले ह*स्तमै*थुन गरेपछि…
अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठीले अभिनय गरेको मिर्जापुरमा ह*स्तमैथु*नको सिन दिएका कारणले चर्चामा आएकी हुन् ।
पाेखरा ५ भदाै- भारतीय सिनेमा उद्योगकी एक नव अभिनेत्री हस्तमैथुन गरेका कारण चर्चामा आएकी छन् । अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठीले अभिनय गरेको मिर्जापुरमा ह*स्तमैथु*नको सिन दिएका कारणले चर्चामा आएकी हुन् ।
लाइब्रेरीको कुनामा बसेर एउटा कामुक किताब पढ्दापढ्दै उत्तेजित भएर हस्तमैथुन गर्न थालेको सिन फिल्ममा राखिएको छ । उक्त सिनको तीव्र विवाद भएको छ । तर यो सिन दिँदा आफूलाई कुनै ग्लानी वा पछुतो नभएको प्रतिक्रिया उनले दिएकी छन् । ‘मलाई यो सिन गर्न कफी पिएजस्तै सजिलो भयो’, उनले भनेकी छन्,‘म स्क्रिप्ट पाउनासाथ उत्साहित भएँ ।’
कसैलाई काउकुती लगाएको बन्दै मन पर्दैन । कसैलाई पर्छ । तर यो व्यक्तिगत स्वभावको कुरा हो । त्यस्तै काउकुती लगाउँदा कोही हाँस्छन् त कोही रिसाउँछन् ।
त्यस्तै कसैलाई काउकुती लगाएको बन्दै मन पर्दैन । कसैलाई पर्छ । तर यो व्यक्तिगत स्वभावको कुरा हो । त्यस्तै काउकुती लगाउँदा कोही हाँस्छन् त कोही रिसाउँछन् । काउकुती दई प्रकारका हुन्छन् एक हल्का किसिमको दबाब त अर्काे केही कडा किसिमको दबाबले गर्दा हुने काउकुती जसले हाँसो उठाउँछ । अब काउकुती किन वा कसरी लाग्ने गर्छ भन्नेमा वैज्ञानिकहरु के भन्छन् त ? छालामा स्पर्श हुँदा त्यसमुनि रहेका स्नायुका टुप्पोले मस्तिष्कमा विद्युतीय सन्देश पठाउँछन् ।
आफूले आफैँलाई किन काउकुती लगाउन सकिदैन त ? यसको कारण हाम्रो मस्तिष्कमा भएको सेरेबेलम भन्ने भागले गर्दा हो जसले हामीले गरेको गतिविधिमा ध्यान दिन्छ । त्यो भागले शरीरमा हुने स्वभाविक वा अस्वभाविक तरंगहरु थाहा पाउन वा छुट्याउन सक्छ । अर्थात् तपाइ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने उसलाई पहिल्यै थाहा भएकोले गर्दा आफैले काउकुती लगाउँदा मस्तिष्कले कुनै प्रतिक्रिया नगरेको हो ।
तर केही गम्भीर किसिमका मानसिक रोग (जस्तै, स्किजोफ्रेनिया) का बिरामीले भने आफैँलाई काउकुती लगाउन सक्छन् । किनकी उनीहरुको दिमागले आफैँले आफैँमाथि गरिएको गतिविधिबारे भेद छुट्याउन सक्दैनन् ।केही जनावरहरुलाई पनि काउकुती लाग्ने गर्छ । शार्कहरुलाई थुतुनोको ठीक मुनि काउकुती लगाउँदा तिनीहरुले क्निस्मिसिस् (हल्का काउकुती) महसुस गर्छन् । तर गार्गलिसिस्(निकै हाँसउठ्तो काउकुती) चिम्पान्जी, गोरिल्लाहरुमा मात्र देखिन्छ ।